पर्व, संगठन र बिदा
२०७४ फागुन ५ शनिबार ०९:२६:००
नेपाल त्यो मुलुक हो, जहाँ झन्डै पूरै जनसंख्याको हाराहारी सहिदहरुको संख्या छ । त्यति नै संख्यामा नेताको संख्या र नेताकै संख्याको हाराहारीमा पार्टीको संख्या छ । त्यसमाथि हरेक मन्त्रीमण्डल बिस्तारसँगै बन्ने मन्त्रीहरुको रेकर्ड-ब्रेकर संख्या । संख्याको कुरा गर्दा मुलुकको प्रगति भसक्कै अघि बढेको भान हुन्छ । कुनै पनि खर्चहरुमा बढेको शून्यको संख्या, रोजगारीको खोजीमा भौतारिएर विदेशतिर कुद्नेको संख्या त बेहिसाब छ ।
संविधान आइसकेपछि नि जनताले महसुस गरेको उपलब्धि शून्यको के कुरा गरम् ? भूकम्पपीडितलाई सहयोग र पुनर्निर्माणमा भएको उपलब्धि शून्यको संख्या के कुरा गरम् ? चाकरी, चाप्लुसी गर्दै ठूलाबडाकहाँ भित्र-बाहिर गर्नेको संख्या त के कुरा गराइ भो र ? कुरोको चुरो यही हो कि हामीकहाँ संख्याको वृद्धिदर औधी छ । र, वर्षकै दिनहरुको हाराहारी संख्यामा बिदा र त्यसैको दोब्बरको सङ्ख्यामा पर्व र दिवसहरु । कम्ता रमाइलो छैन हाम्रो जीवनशैली !
अरु त अरु- नयाँ वर्षको संख्या नि कम्ता बढिरहेको छैन । एउटा विक्रम सम्वत् । अर्को इश्वी सम्वत । अर्को नेपाल सम्वत । फेरि शेर्पाजीहरुको चरा-मुसा सम्वत । क्यालेन्डर सम्वतै सम्वतले सम्वताम्मे भएपछि अब नयाँ वर्षको के दु:ख ? एक वर्षमै ५-६ वटा नयाँ वर्ष ।
दशैँ दुइटा, यासपालि झन् तीनटा- चैते नै दुइटा । ल्होसार तीन-चार वटा । अरु त अरु- तन्त्र दिवस नै तीन वटा । एउटा त प्रजातन्त्र दिवस, अर्को लोकतन्त्र दिवस । अनि अर्को गणतन्त्र दिवस । एउटै पर्व र दिवसको संख्या वर्षमा यति बढ्दै गइरहेको छ कि अब उही दिवसहरुले आफ्नो संगठन नै बनाउन बेर छैन । ल्होसारहरुको एउटा संगठन, नयाँ वर्षहरुको अर्को संगठन । तन्त्र दिवसको अर्को संगठन । अनि जो थोरै संख्यामा रहेका दिवस र पर्वहरु छन्, तिनको छिटफुट दलीय मोर्चाजस्तो अर्को संगठन । अनि यस्ता दिवसहरुकै आन्दोलन हुन बेर छैन- आफ्नो पालामा बिदा होस् भनेर ।
अब प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानसभाबाटै संविधानलगायत आउने जति सबै आइसकेको मुलुकमा दिनहरुको संख्यामा किन भेदभाव गर्नू ? सबै पर्व र दिवसलाई उत्ति नै दिन दिए कसो होला ? अरु त त्यस्तै हो, शिवरात्रि चैं ४-५ पटक आउनै पर्ने हो । कम्ता रमाइलो पर्व होइन यो । तर, आउँछ पो कसरी ! सरकारले त घोषणा गरिदेला- तर भगवान शिवले ३-४ पटक जन्म लेलान् र हाम्ले इच्छा गर्दैमा ?
जेहोस् भ्यालेन्टाइन डे पनि आउनुपर्छ- वर्षको कम्तीमा १० चोटि अनि यहाँ प्रेमको कमी हुन्न । गुरु पूर्णिमा, बाको मुख हेर्ने, आमाको मुख हेर्ने पनि थुप्रै पटक आउनुपर्छ ताकि अर्तिउपदेश र आशिषको कमी नहोस् । वर्षको ४ चोटिमात्र होली हुने भए लोला हान्ने काम पाउँथे टपर्टुइँयाहरूले ।
अनि अप्रिल फुल ? त्यो त एकपटक नि नआए हुन्छ किनकि यहाँ ढँटुवाहरुको कुनै कमी छैन । ढाँट्न र मूर्ख बनाउन मानिसले अप्रिल कुर्दैनन् । वर्षभरि नै ढाँट्ने र मूर्ख बनाउने, बन्ने प्रक्रिया चली नै रहेको छ । अप्रिल फुल वर्षमा ३६५ दिन नै छ । बरु घटाए कसो होला ?